Nialana sasatra tamin'ny bilaogy! | Martech Zone
Nialana sasatra tamin'ny bilaogy!
Zoma, Martsa 23, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tsara be aho tamin'ny nanandrana lahatsoratra kalitao 1 tao amin'ny tranokalako narahan'ny lahatsoratra iray tamin'ireo rohy sy lahatsoratra tsara indrindra tao amin'ny Internet nandritra ny fotoana kelikely. Omaly alina aho naka Blog Break. Ny tsara indrindra, ny fialan-tsasatry ny bilaogy dia mety hidika hoe natory aho ary natory rehefa namaky. Tsy ho ahy.
Omaly alina aho dia nanohy ny fampandrosoana ny Google Map ho an'ny fikambanana asa soa eto an-tanàna. Tetikasa freebie mahafinaritra izay mety ampiasaina na tsy ampiasaina - fa ny maha-ampahany amin'ny zavatra lehibe kokoa noho ianao dia traikefa nahafinaritra foana. Nampahafantatra ahy olona vaovao aho ary nampiharihary ahy tamin'ny indostria vaovao, miampy hatrany.
Izaho koa dia nisy mailaka nahafinaritra niverimberina niady hevitra momba ny kalitao momba ny fitantanana ny vokatra. Resadresaka mahafinaritra foana ity, ny loza ateraky ny tsy fandefasana na fanomezana zavatra mety tsy mety. Antso mafy izany. Hatoky ny fihevitr'ireo mpamolavola ahy aho ary hahita izay majika azon'izy ireo atao.
Ho tompon'andraikitra amin'izany aho, ka tena mametraka ny tenako any ivelany any. Gaga anao matetika ny olona rehefa omenao hery izy ireo. Izany no zavatra toriko, ka aleoko miaina amin'ny teniko manokana!
Tsy mbola nanana mpamaham-bolongana vahiny teto aho fa faly mizara ny sain-doha. Arotsaho hevitra aho mifandraisa amiko raha mahaliana anao. Tsy mila manana bilaogy akory ianao. Raha ny marina dia aleoko misy olona tsy mitoraka bilaogy hiaraka amin'ilay resaka. Angamba ianao 'hisambotra ny bibikely'.
Ho an'ireo namako bilaogera, moa ve ny fananana bilaogera mpitsidika dia miteraka asa bebe kokoa na kely kokoa? Liana te hahafantatra fotsiny.
Famoahana ny boky! Renée Pawlish: Nefilima, Genesis of Evil
Mar 23, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Mbola miasa ny bilaogy vahiny. Ny zava-misy dia tsy dia azo inoana kokoa ny hahazo traikefa amin'ny bilaogera toa anao - matetika ireo bilaogera vaovao no te-hivahiny bilaogy. Mbola misy fifandraisana bebe kokoa ihany koa.
Mar 24, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Raha nomena lohahevitra azoko velabelarina tokoa aho, dia ho faly aho ho vahiny. Izany no iray amin'ireo traikefa maro mbola tsy nodiaviko, ary raha tafavoaka velona aho dia azo antoka fa ho asa lehibe iray izany.
Apr 3, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Raha vao manangana fifamoivoizana aho dia hiezaka ny hampiditra bilaogera vahiny. Toa ho asa bebe kokoa izany fa samy hahazo tombony amin'ny fiaraha-miasa ny bilaogera. Zavatra heveriko fa tokony hataon'ny bilaogera bebe kokoa izany